Ukuvulwa kwakhona kwe-US: Ugonyo olupheleleyo kunye novavanyo olungenayo i-COVID-19 luyafuneka
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Ukuvulwa kwakhona kwe-US: Ugonyo olupheleleyo kunye novavanyo olungenayo i-COVID-19 luyafuneka
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Ukuvulwa kwakhona kwe-US: Ugonyo olupheleleyo kunye novavanyo olungenayo i-COVID-19 luyafuneka.
Ulawulo lwe-Biden lubhengeze ukuba i-United States "iza kumka kwizithintelo zelizwe nelizwe ebezisetyenziswa ngaphambili" kwaye yamkele umgaqo-nkqubo "oxhomekeke ikakhulu kugonyo ukuqhubela phambili ngokukhuselekileyo kohambo lomoya lwamazwe ngamazwe" ukuya e-US.
Izithintelo zokuhamba zase-US, ezibekwe ngoMatshi ka-2020 kwaye zahlaziywa nguBiden ekuqaleni kwalo nyaka, ziya kuphakanyiswa kwiiveki ezimbini.
Izithintelo eziphumayo ziya kutshintshwa zizithintelo ezitsha ezibandakanya ubume bogonyo kunye nokukhangelwa kwabafowunelwa.
Izitofu zokugonya ezamkelweyo ziya kuba kuphela ezo zivunyiweyo okanye zigunyaziswe yi-US Food and Drug Administration okanye iWorld Health Organisation.
I-White House ibhengeze ukuba iindwendwe zamazwe ngamazwe zingena US ekuvulweni kwakhona kwelizwe nge-8 kaNovemba kuya kufuneka aveze ubungqina bogonyo olupheleleyo kunye neziphumo ezibi zovavanyo lwe-COVID-19 ekufikeni kwakhe.
Kwingxelo ekhutshwe namhlanje, uLawulo lweBiden lubhengeze ukuba eunited States "iya kusuka kwizithintelo zelizwe nelizwe ebezisetyenziswa ngaphambili" kwaye yamkele umgaqo-nkqubo "oxhomekeke ikakhulu kugonyo ukuqhubela phambili ngokukhuselekileyo kohambo lomoya lwamazwe ngamazwe" ukuya e-US.
Izithintelo zokuhamba zase-US COVID-19, ezenziwe ngoMatshi ka-2020 kwaye zahlaziywa ekuqaleni kwalo nyaka, ziya kuphakanyiswa kwiiveki ezimbini, kodwa ziya kuthatyathelwa indawo zizithintelo ezitsha ezibandakanya imeko yokugonywa kunye nokulandelwa koqhagamshelwano.